NDlọ ọrụ mmepụta ime ike
The Industrial Design Team na-arụpụta ọtụtụ ndị magburu onwe ọrụ na ọkachamara imewe mma kwa afọ. Ndị otu a na-enye ndị ahịa usoro dị iche iche dị elu nke ngwaahịa na-arụ ọrụ site na usoro dị ka atụmatụ oru ngo, nyocha echiche, imepụta ngwaahịa, ihe ngwọta, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, njikarịcha mmepụta, nkwakọ ngwaahịa na nkwukọrịta anya. Ka ọ dị ugbu a, ọ guzobere mmekọrịta dị ogologo oge na ndị otu ụlọ ọrụ mmepụta ihe na Germany, Sweden, Hong Kong na Taiwan iji tinye teknụzụ ọhụụ na echiche imepụta ngwaahịa ọhụụ.
ỌZỌ COMB COMR COM COMLỌ NTPKWU
Nleta azụmahịa, data ahịa na akụkọ nyocha, Onye na-agba ọsọ na-anọ n'ihu ndị ahịa, ma nyere ha aka ịchọpụta ohere azụmaahịa ọhụrụ na imepụta ngwaahịa ọhụrụ. Anyị kwenyere na n'agbanyeghị etu ọdịnihu ga-esi gbanwee, ikike anyị ịrụ ọrụ, imepụta ihe ọhụrụ na ikike nyocha, bụ ụzọ anyị na-achụ, "ọganiihu ndị ahịa" bụ ebumnuche anyị ikpeazụ.